12 Aghụghọ iji Jikwaa Ọrụ Igwe ojii Dị otutu | Ọ BỤ
Ijikwa otutu ígwé ojii Ọrụ - DevOps
Ọ dịghị ahịa ahịa igwe ojii nwere ezigbo azịza maka otu n'ime ọnọdụ ahịa azụmahịa dị mma. Ụzọ kachasị mma iji mee ka ochichi ígwé ojii baa uru na azụmahịa gị bụ site n'inweta igwe ojii ígwé ojii ole na ole na ilele ha niile n'oge ahụ. Nke ahụ bụ ihe a ga-akpọ ịkpọ abụ aria mgbe ị na-adịgide n'isi gị na akwa nchara. (Ọ bụghị site n'echiche ọ bụla, ma ọ nwere ike ịpụta ya.)
Ihe a bụ ihe 12 icheta mgbe ị na-ahazi usoro usoro igwe ojii nke usoro gị:
Nhazi usoro zuru ezu, ma mgbe o gosipụtara ebe igwe ojii na-adaba n'ime ya:Nweta foto ezi uche nke igwe ojii na usoro usoro nlekọta gị n'ozuzu iji zere ịmalite ịnweta ihe ọmụma nke ndị nlekọta azụmahịa na ndị ahịa dị iche iche. Uzo ahia di iche iche ga adi nma n'enye ndi oru ozu ahia.
Na-arụ ọrụ na ndị ahịa na-eme ngwa ngwa ma na-enwe mmetụta siri ike na ihe a na-atụghị anya ya. A ghaghị ịdabere na ọnọdụ ndị a na-atụghị anya ya mgbe ị na-ehichapụ ọnụ ọgụgụ ígwé ojii. Ogwugwu gi kwesiri ikwuputa na onodu nke ochichi ha, nkwalite, na ihe ndi ozo.
Ịmepụta nlele na nkwado ọrụ dị ala. Nkọwa abụọ dị mkpa n'azụ ịnakwere ọchịchị igwe ojii bụ ego ego na arụmọrụ nke ọma. Otu ụzọ ị ga-esi mezuo ya bụ site n'ịbelata nlekota nlekọta ụmụ mmadụ chọrọ ka ị na-atamu ntamu.
Ihe nwere ike ịchọta ọtụtụ ndị na-achịkwa igwe-ojii na-achịkwa na nke a na-agụnye ọtụtụ ihe ndị a ga-ejikọta ọnụ. A ghaghị imepụta ọnụ ọgụgụ dị ịrịba ama nke arụmọrụ dị ala a iji meziwanye usoro gị. Isi: Carl P. Lehrmann, 451 Research
Were mgbe ndị ahịa gị. Jiri nlezianya tụlee otú "ndị na-azụ ahịa" nke ngwa na ntanetị na-etinye ngwaọrụ iji jiri ya. Ha bụ usoro kachasị mma nke usoro kachasị mma. Ị nwekwara ike ịchọpụta banyere ọhụụ ọhụrụ ọ bụla ndị ahịa na-achọta na-enyere ha aka mezue ọrụ ha ngwa ngwa, na-enwekwu ọganihu na ọzọ na-abaghị uru. Nke a na - enye gị ohere iji nweta ụdị nkwanye ụdị ngwá egwu ndị ahịa na - achọ ka ha mee.
Abụọ abụọ na njikwa ego. I nweghị ike ịchịkwa ihe ị na-ahụghị. Ijikwa ọtụtụ ndị ahịa na-agbagha usoro maka ịhazi ochichi ọhụrụ. Iji zere ihe mgbagwoju anya maka mkpochapụ ngwa ngwa nke ndị ọchịchị ọhụrụ aka, chepụta usoro ịzụ ahịa bụ nke na-edozi dịka nchịkọta onwe ha. Ka o sina dị, ọ bụghị ogologo oge mgbe nlekọta ahụ gasịrị oge mbụ nke abalị, chọpụta ma ọhụụ ọ bụla a ga-eme ka ọ bụrụ onye ezi omume n'agbanyeghị ụgwọ na ma ọ dị oke nhọrọ yana ọnye dị oke ọnụ.
Ịdị ndụ ndụ na-anọgide na-eduzi igwe ojii. Ugbo ogugu nwere ike gbagha, ma ha adighi ala. Maka ihe ndị a chọpụtara na nchedo, nchịkọta, nchedo, na ụdị ọnụọgụ dị iche iche, usoro ole na ole na-adị n'ime ụlọ ruo ọtụtụ afọ. O doro anya na ọ dị mkpa ka ị zere ịgbalị ịkwalite na ịkwaga ngwa ngwa n'ime ụlọ iji uru ígwé ojii, karịsịa nke dị nanị afọ abụọ ma ọ bụ atọ ma n'ụzọ dị otú a akwụbeghị ụgwọ n'onwe ya. Ozugbo a kwadoro usoro doro anya maka nyochaghachi, ọ dịkarịrị mkpa ịmepụta nkwụchitere azụmahịa maka igwe ojii-mpaghara.
Jiri ike nke tupu emptable igwe igwe. Ebe ọ bụ na ha anọgideghị na-agbatịkwu oge karịa 24 awa, VM ndị a na-ebute ike bụ mkpebi dị mma iji mee ihe n'ụzọ zuru ezu ma na-ata ụta maka ndokwa na-edozi, dịka na KọmputaWorkly's Matthew Cooter na otu isiokwu November 2016. VM ndị a na-ebute ụzọ dị ka 80 pasent dị ọnụ ala karịa ihe nlereanya nkịtị nke Google, na enyemaka ha bara uru na-enyere ndị òtù aka ịhazi ma na-emefu ego ha.
Jide nkwekọrịta nchịkwa ihe nkesa na-edozi maka atọrọ maka ọnọdụ ọma. Nke a bụ ụzọ kachasị mma iji kwenye na ihe nkesa gị, ịkwakọ ngwaahịa, nhazi, nchekwa, arụmọrụ na ngwa dị iche iche na-arụ ọrụ dị ka otu na-arụ ọrụ na-emetụta ihe ndị ebumnuche, dị ka Jay Litkey, onye isi na onye sitere n'ichepụta ọkachamara ígwé ojii na-akpọ Embotics, na November 21, 2016, isiokwu dị na magazin Virtual Strategy. Nlekọta ọ bụla a na-ahazi na ntọala iwu omenala ga-aga agha na ịkwaga ebe a na-agafe ọnọdụ na ụdị igwe ojii.
Ịmata ọdịiche dị na ngwa na mkpakọrịta gị na- nke kachasị mma maka igwe ojii-mpaghara ojiji. Ngwa ndị omenala siri ike, na-agba ọsọ dị ka VM, jiri nkà na ụzụ na-arụ ọrụ ma bụrụ nke kachasị ike ịmepụta, zipu ma debe. Site na iche iche, ngwa igwe ojii-mpaghara na-ezoro ezo na nchịkwa, gụnyere nchịkọta nke ụlọ ọrụ na nchịkwa, na ntụgharị nke atụmatụ, ma dị mfe iji robotize, ịkwaga, na nha.
Na-elekwasị anya na ngwa ndị gị na ha na-akpakọrịta ga-erite uru site na igwe ojii na mpaghara, na-aga ndị na-arụ ọrụ nke ọma na nzukọ na-arụ ọrụ ubi. Isi: TechTarget
Dezie ngwa gị na nchịkọta ndị na-arụ ọrụ ha. Dika nchịkwa aha, dịka ọmụmaatụ, VMware na AWS agbanyelarị iji gboo mkpa dị iche iche nke ndị ahịa ha. Dịka ọmụmaatụ, a na-atụ anya na Enterprise Hybrid Cloud na VMware dabeere na omenala ya, ma a na-atụle Nlekọta Ụdị Igwe ojii nke a na-ejikọta ya, nke a na-ejikọta na microservice. N'ikpeazụ, AWS's Elastic Compute Cloud, Store Elock Block, EFS na-ede akwụkwọ na VPC ndị ọzọ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ n'ime ụlọ ụlọ ọrụ nkesa, mgbe nzukọ ọzọ na-eme ka ọnụ ọgụgụ ndị ka elu, dịka ọmụmaatụ, data NoSQL, njikwa BI, ahịrị, nchịkọta nchịkọta push, transcoders mgbasa ozi na ntanetị weebụ.
Njikọ Robotize na-agabiga n'ọnọdụ igwe ojii. Ụzọ kachasị mma ị ga-esi na-eme ihe banyere iji ọrụ igwe ojii na-eme ihe dị iche iche bụ inwe otu ihe nkwekọrịta maka otu ndokwa nke ejikọtara ya na gburugburu ebe ọ bụla. Ihe ndị na-abịakwute na-ekpuchi ụdị ọkwa ndị dị ka sava melite, arụ ọrụ, nchịkọta ozi, iyi ọrụ, njigide / njikwa, akuko na nchekwa. N'otu aka ahụ, ọ na-achọ ka ị tinye nlele ma gbanwee ma ọ bụrụ na ị nwere ndokwa naanị otu aka na-agafe n'elu ihe dịgasị iche iche n'eziokwu nke na ọganihu na-ebuli site na gburugburu ebe obibi ruo gburugburu ebe obibi.
Onye na-ere ahịa na-abanye n'ime oge ndị ọzọ. Mgbe ị na-adabere kpamkpam na uru ígwé ojii na-emeghe, ọ ga-esiri ike ịkwaga igwe igwe dị iche iche na ihe dị iche iche na nchịkwa ọzọ. Otu n'ime ihe ndị a ga-atụle bụ ihe ndị a na-atụghị anya / idekọta ibu, mkpa mgbanwe ọmụma na usoro inertness. Site na ịdabere na nkwekọrịta omenala nke ọchịchị ígwé ojii, nke ọ bụla na-arụ ọrụ na atụmatụ, ị na-eme ka ị gbanwee mgbanwe banyere mgbanwe ahụ kama ịgbanwe mgbanwe gị.